Umhlaba wesi-3 kuMashi umenyezelwe - The World March
Ikhaya » Izaziso » Amanothi e-Press » Umhlaba wesi-3 kuMashi umenyezelwe
18 / 10 / 2020 04 / 10 / 2020 por Antonio Gancedo
Umhlaba wesi-3 kuMashi wango-2024 umenyezelwe eForamu Yezinhlekelele eMar del Plata - e-Argentina
Ekugubheni i- Isikhumbuzo seminyaka engu-10 we Isonto Lokungabi Nodlame eMar del Plata Kuqhutshwa Osvaldo bocero y UKarina Freira lapho izishoshovu ezivela emazweni angaphezu kwama-20 e América, Europa y Afrika.
Lapho Rafael de la Rubia umemezele bukhoma kusuka Madrid ukuthi 2024 the 3ª World March for Ukuthula kanye Nonviolence.
El Iforamu Yezokungabi Nodlame Kwaqala ngomkhosi omncane futhi ongokomzwelo wesicelo sokuthula komhlaba ngezilimi ezintathu: español, isi-portuguese y isiguarani. Kwakuyimizuzu embalwa yokuzindla nokuxhumana phakathi kwabahlanganyeli.
U-Osvaldo wethule impumelelo kanye nenqubekela phambili yalokho okuqale njenge- Isonto Lokungabi Nodlame ngaphakathi kohlaka I-1ª World March ku 2009 nokuthi iqhubeke kanjani phakathi nale minyaka eyi-10. Idokhumenti efingqiwe emfushane ihlolwe ngemifanekiso yalolo hambo.
Siveza ezinye zeziphakamiso ukuthi Rafael de la Rubia, okhulumela i I-World March, enkulumweni yakhe:
"Ingabe Isonto Lokungabi Nodlame Kuyisibonelo sokuhlala unomphela iminyaka eyi-10, esebenza njengokukhuthaza. Kungumsebenzi oqhubekayo kule nqubo, osikhombisa indlela nenqubekela phambili.
Ukungabi nodlame kweZwi:
Ngalolu suku sifuna ukubheka igama elithi ukungabi nodlame
Ekuqaleni kukaFebhuwari 2016, ku- Iforamu yasePeña Blanca (Honduras), inhlangano yabantu I-MSGySV wethule umkhankaso wokufakwa kwegama elithi ukungabi nodlame kusichazamazwi se Izikole zolimi lwaseSpain.
Imayelana nokwelula lesi senzo nakwezinye izilimi ezingenalo lelo gama. Ukungabi nobudlova ngesiRashiya kuthiwa ненасилие, ngesiCzech kunjalo nenásilí, ngesiJalimane gewaltlosigkeit, ngesi-Italian nonviolenza nangesiNgisi ukungabi naluvivinyo, kodwa ngeSpanishi ayikho.
Ukuze igama lifakwe kusichazamazwi solimi lwaseSpain, kufanele kubhalwe phansi ukuthi lisetshenziswa ngokujwayelekile, lokhu kusebenza kokufakwa kwalo okungenzeka. Ngakho-ke kuxhomeke kubasebenzeli bezenhlalakahle ukuthi basebenze ukuze ukusetshenziswa kwayo kwenziwe ngokujwayelekile nokuthi incazelo yayo ifane futhi iqondwe kuzo zonke izindawo lapho kukhulunywa khona iSpanish.
Sisebenzisa ngokunenzuzo Usuku Lokungabi Nodlame ukuyimema ukuthi isetshenziswe njengegama elilodwa, ngokuhlangene nangaphandle kwekhonco, ngakho-ke singathola igama ligunyazwe ngolimi lweSpanishi. Masibambisane ukuze sisebenzise ukusetshenziswa kwalo futhi, ngalo, sinikeze ibhizinisi kwigama elingukhiye lesikhathi esisha senhlalo.
Umkhosi Wefilimu We-Nonviolence: Namuhla uqala lo Mkhosi Wezinsuku Ezi-3 okhuthazwe ngu- FICNOVA.
ULwandle iMedithera Lokuthula: Umkhankaso uqale ku I-2ª World March lokho kuhlose ukuguqula i- IMedithera olwandle lokuthula, umhlangano wamasiko futhi ongenazikhali zenuzi.
- Sketchbook of the Isihleli Saure. Amakhasi ayi-100. Izophuma emasontweni ambalwa. Ngezilimi zesiCastilian nesiBasque. Ama-editions ngezinye izilimi alindelekile.
- Incwadi ye- Unobhala weNobel Peace Prize: Uye wabuzwa I-MSGySV bhala isahluko ngokungabi nodlame. Kufanele siyilethe ngoDisemba walo nyaka.
-Incwadi ye-MM yesibili. Sinokuqukethwe nomhlangano. Imininingwane isashoda kwezinye izindawo.
Sicabanga ukulinda isikhashana bese sikukhipha lapho i- TPAN. Uma kunjalo-ke sizofaka isahluko esithile kuleso sihloko.
- Sisebenzela ukubamba uMkhosi Wezakhamizi Womhlaba Wokulwa Nezikhalazo ngesihloko esithi TPAN ukubungaza ukungena kwayo lapho ngiyimemezela IZizwe Ezihlangene. Sibala ukuqala kuka-2021.
- Sizobamba iqhaza kwi Mashi Wokuthula Perugia - Assisi ngo-Okthoba 10 olandelayo.
- Ingqungquthela Yomhlaba Wonke: Ngo I-Geneva ekupheleni kuka-Okthoba, Unobhala weNobel Peace Prize umemile I-MSGySV ngenelela ngokuhlanganyela nezinye izinhlangano zamazwe omhlaba ezi-4, ukuze abantu abasha abavela kulezi zinhlangano bethule iziphakamiso zabo, amaphrojekthi kanye nezenzo zabo.
- Isigcawu Sesifunda Sokuthula eLatin America ekuhambeni kuka 2021 iqhutshwa Umklomelo Wokuthula KaNobel ngokusekelwa yidolobha lase IMerida-Mexico namayunivesithi ayi-9 esifundeni Maya. Umzimba wethu nawo umenyiwe I-MSGySV.
-3rd World Mashi
-Simemezela ngokusemthethweni lokho I-3ª MM izoqala ngo-Okthoba 2, 2024
-Njengo kufayela le- I-2ª MM izoqala futhi iphele edolobheni elifanayo ngemuva kokujikeleza iplanethi.
-Izofaka izinkambo zezifunda ezinjenge: INingizimu Melika Mashi, ICentral American March, Mashi oLwandle iMedithera Lokuthula y Latin American Mashi. Siyethemba ukuthi kuzoba nabanye abazojoyina. Sethemba ukuthi sinemashi enobunikazi kuwo wonke amazwekazi.
-Izofaka nefomethi yokuvakasha ebonakalayo, ukuze inikeze ukubamba iqhaza okukhulu kakhulu kulabo abanentshisekelo.
Ikhalenda le-3 World March
Ngo-21/6/2021, izisekelo zizokwaziwa ngamadolobha ukufaka isicelo se-3rd MM 2024.
-Amadolobha azongenela ukhetho azothumela isicelo sawo ku-21/6/2022.
-2/10/2022 izomenyezelwa lapho i-MM yesithathu izoqala / igcine khona.
-Ukuqala kwe-2/10/2024 kwe-3rd World March
Kusuka ku Iqembu le-MSGySV Global Coordination Ngiyaziswa ukuthi ngo-Okthoba kuzobalwa ukubalwa kwamalungu okusha bese kuthi ukhetho lweqembu elisha lomhlaba wonke lubanjwe. Ngemuva kwalokho sikumema ukuthi ubambe iqhaza futhi ujoyine Izwe elingenayo iWars nobudlova.
Akukho okunye, ngiyabonga kakhulu…
Siyabonga uLiz Vasquez ngokuhunyushwa kwesiNgisi kwalesi sihloko.
Inhlonipho kuGastón Cornejo Bascopé